အသက်ရှူချောင်လာတော့မည့် မြန်မာ့ပဲလောကဈေးကွက် | Commerce
LAWS & NOTIFICATIONS
EXPORT & IMPORT BULLETIN
BUSINESS REPRESENTATIVE BULLETIN
Import Procedure Excerpt
TRADE / KNOWLEDGE
ASEAN Free Trade Area
ASEAN-China Free Trade Area
ASEAN-Korea Free Trade Area
ASEAN-Japan Free Trade Area
ASEAN - Australia New Zealand Free Trade Area
ASEAN-India Free Trade Area
Preferential Trading Arrangements
Generalized System of Preferences
Trading Across Border
About Rule of Origin
CO Forms for Preferential Tariff Treatment
Tariff Rate of ASEAN and Dialogue Partners
USA GSP Post Hearing Brief
Knowledge of Non-Tariff Measure-NTMs
Trade Policy Review(TPR)
Trade and Logistic
Knowledge of Business Visa
Knowledge for EIF
TRADE DATA & CHART
TRADE BY BUDGET YEAR
EXPORT/IMPORT TRADE FOR NORMAL AND BORDER BY BUDGET YEAR
EXPORT/IMPORT TRADE FOR NORMAL AND BORDER BY GOODS SECTOR BY BUDGET YEAR
EXPORT/IMPORT TRADE FOR NORMAL AND BORDER OF NATIONAL AND PRIVATE SECTOR BY BUDGET YEAR
EXPORT/IMPORT TRADE FOR NORMAL AND BORDER OF RESPECTIVE COUNTRIES BY BUDGET YEAR
EXPORT/IMPORT TRADE FOR NORMAL AND BORDER OF RESPECTIVE BORDER STATION BY BUDGET YEAR
COMPARISON OF TRADE IN THE SAME YEAR
COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST
COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR
COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR
COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST
ASEAN Import Procedures
WTO Import Procedures
FAST INCITEMENT SYSTME AND INFORMATION EXCHANGE ASSOCIATION
ANNOUNCEMENT FOR CONSUMER
CROSS BORDER CONSUMER ACTION GROUP
TRAINING & EDUCATION ASSOCIATION
CONSUMER COMPLAIN ASEAN WEBSITES
LIST OF LOCAL AND GLOBAL EXHIBITIONS
FACTS OF EXHIBITIONS
NATIONAL EXPORT STRATEGY
Thu, 06/20/2019 - 02:45 -- admin_ygn
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်၏ ဒုတိယသက်တမ်း ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး အပြန်ခရီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံ ပဲသုံးမျိုးတန်ချိန်ငါးသိန်းကို အိန္ဒိယက ပြန်လည် ဝယ်ယူပေးမည့် သတင်းကောင်းကို သယ် ဆောင်လာခဲ့သည်။ အလွန်မင်္ဂလာရှိသည့်သတင်းဖြစ်ပြီးပဲ Exporter ကြီးများ၊ စိုက်ပျိုးသူ တောင်သူလယ်သမာကြီးများလည်း မြန်မာ့တောင် သူလယ်သမားကြီးများ၏ အကျိုးစီး ပွားအတွက် သတိတရဆောင်ရွက် ပေးခဲ့သည့် သမ္မတကြီးကို အထူးကျေးဇူးတင်နေရမည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးသူကလည်း အိန္ဒိယက မြန်မာ့ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံတို့ကို ပြန်ဝယ်မည်၊ မတ်ပဲ တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲ၊ ပဲတီစိမ်း တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲနှင့် ပဲစင်းငုံတန်ချိန် နှစ်သိန်း စုစုပေါင်း တန်ချိန် ငါးသိန်းဝယ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီသတင်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာ့မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံဝယ်ယူနေမှုကို ရပ်ဆိုင်းခံလိုက်ရပြီးကတည်းက အရုပ်ကြိုးပြတ်လို ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့ပဲ Exporter ကြီးများ၊ ပဲစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် အတော်ေ လးကို အသက်ရှူ ချောင်သွားစေမည့် အကျိုးရလဒ်ပါပဲ။
မြန်မာ့လယ်ယာကဏ္ဍမှာ သီးနှံအမျိုးပေါင်း(၆၀)ကျော် စိုက်ပျိုး နေတဲ့နေရာမှာ ပဲမျိုးစုံ(၁၉)မျိုးကို ဧကပေါင်း ၁၁ဒသမ ၅၀သန်းကျော် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၁ဒသမ၁ရာခိုင်နှုန်း စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါ သည်။ ပဲမျိုးစုံစိုက်ဧကထဲမှာလည်း မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံစိုက် ဧကမှာ ၆၆ရာခိုင်နှုန်း စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဥရောပနိုင်ငံ များသို့ ပဲမျိုးစုံ စုစုပေါင်းတန်ချိန် ၁ဒသမ ၃သန်း တင်ပို့လျက်ရှိသည်။ အဓိက တင်ပို့နေသည့် ပဲမျိုးများ မှာ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကုလားပဲ၊ မြေတောက်ပဲ၊ ပဲလွန်းတို့ဖြစ် သည်။ အိန္ဒိနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် ယခင်နှစ် က ပဲတင်ပို့မှု မရပ်တန့်မီထိ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုသည် နှစ်(၃၀)ကျော်ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံက အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံတင်ပို့မှုကို ပြန်ကြည့်လျှင်၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ် စာရင်းအရ ပဲမျိုးစုံသုံးမျိုး တန်ချိန်မှာ ၁၀ သိန်းနီးပါးတင်ပို့ခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ပဲမျိုးစုံပြည်ပသို့တင်ပို့မှု၏ ၇၇ဒသမ၀၃ရာခိုင်နှုန်းသည် မတ်ပဲဖြစ်ပြီး တင်ပို့ခဲ့သည့်နိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဖန် ပဲစင်းငုံ တင်ပို့မှု၏ ၉၁ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပဲတီစိမ်း တင်ပို့မှု၏ ၈ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံကို တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဒီလို မြန်မာ့ပဲလောကဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားခံခဲ့ရသည့် အိန္ဒိယ၏ ပဲမျိုးစုံကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးဟာ အခိုင်အမာ နှစ်ရှည် ရပ်တည်လာခဲ့သည်။ဒီအချိန်မှာ မြန်မာ့မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲစင်းငုံများကို အိန္ဒိယ မှ အဝယ်ရပ်တန့်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ပဲလောကဟာ ကြီးစွာသော လှိုင်းဂယက်ကြီးရိုက်ခတ်သွား ခဲ့ပါသည်။ ဒီလှိုင်းဂယက်ကြောင့် နိုင်ငံတော်ရော၊ ပဲ Exporter ကြီး များပါ ပြာလောင်ခတ်ပြီး ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် ဘဝနှင့်ရင်းပြီး ဘဝပျက်မတတ် အလူးအလဲ ခံစားလိုက် ကြရတဲ့သူတွေကတော့ တောင်သူလယ်သမားကြီးများပါပဲ။ ယခင်နှစ်က ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးတဲ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း မတ်ပဲဝယ်မယ့်သူမရှိ ဈေးကွက်ပျောက်သလိုဖြစ်နေတော့ မတ်ပဲ စိုက်ပျိုးနေကြ တောင်သူလယ်သမားကြီးများ၊ ဟိုဟာလုပ်ရတော့ မလိုလို၊ ဒီဟာဘဲလုပ်ရတော့မလိုလိုနဲ့ စိတ်သောက အကြီးအကျယ် ရောက်ခဲ့ရသည်။ အချို့ကလည်း မတ်ပဲကို ထိုက်သင့်သလောက်ပြန် စိုက်ပြီး အချို့ဧကတွေကို နွေစပါးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံအစားထိုးစိုက်ပျိုး ခဲ့ကြတာလည်းရှိသည်။ အချို့ဒေသများတွင် အခြားသီးနှံချက်ချင်း ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးရန် မျိုးအခက်အခဲ၊ ဓာတ်မြေသြဇာအခက်အခဲတွေ ကြောင့် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးဆိုပြီး မတ်ပဲကို ဇွတ် ကြဲခဲ့တဲ့ တောင်သူလယ်သမားကြီးများလည်း ရှိခဲ့သည်။
အချို့ဒေသတွေမှာ ပဲစင်းငုံဈေး ကွက်ပျောက်တော့ စိုက်ပြီးသား ပဲစင်းငုံခင်းတွေကို ထွန်စက်ကြီးတွေနဲ့ ထိုးဖျက်ပစ်လိုက်ကြတာ လည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ပဲပေါ်ချိန်ရာသီရောက်တော့ ပဲစင်းငုံဈေးက အတက်ဘက် လှုပ်လာတော့ နောင်တရမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြရပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံ အဝယ်ရပ်လိုက်တော့ စာရေးသူကို ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုပြီး အကူအညီတောင်းခံလာကြသည့် တောင်သူလယ်သမားကြီးများကို အကြံပြုခဲ့ပါသည်။ မတ်ပဲကို ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ပြန်စိုက်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံကိုတော့ သံယောဇဉ်မပြတ်ရုံပြန်စိုက်၊ အခြားဆီထွက်သီးနှံနှင့် နွေစပါး အစားထိုးစိုက်ပျိုးဖု့ိ အကြံပြုခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မတ်ပဲ၊ ပဲတီ စိမ်း၊ ပဲစင်းငုံကုန်သွယ်မှု နှစ်(၃၀)ကျော် ခိုင်မြဲလာခဲ့သည့် သံယောဇဉ်ကြိုးကလေး ပြန်ဆက်လာမယ်ဆိုရင် မိမိနိုင်ငံဘက်က အသင့်အနေအထားရှိဖို့ သတိပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သမ္မ တကြီး၏ ကြိုးပမ်းခဲ့မှုအရ နှစ်သုံးဆယ်ကျော်နီးပါး ကုန်သွယ်မှုသံယောဇဉ်ကြိုးကလေးကို ပြန်ဆက်ပေးလိုက်သည့်အတွက် မြန်မာတို့ ဝမ်းသာအားရ နှင့် ကြိုဆိုကြရပါလိမ့်မည်။ မြန်မာ့ပဲလောကဈေးကွက်လည်း အသက် ရှူချောင်လာမှာဖြစ်သည်။ အဆင်ချောမွေ့စွာ ကတိအတိုင်း တင်ပို့ နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်သည်။ သီးနှံတစ်ခု စိုက်ပျိုးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုလျှင် မျိုးလိုအပ်ချက် ပြည့်စုံရမည်၊ မြေယာပြုပြင်ထွန်ယက်ရေးအချိန်မီ ပြီးစီးပြီး အချိန်မီ စိုက်ပျိုးနိုင်အောင် စိုက်ပျိုးနိုင်ရမည်။ ရိတ်သိမ်းဆွတ်ခူးစနစ်တကျ သိုလှောင်မှုတွေ စီမံနိုင်ရမည်။ ပြည်ပတင်ပို့မည့် ပဲတွေအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ အရည်အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်းမီအောင် ထုတ် လုပ်နိုင်ရမည်။ ဓာတုဓာတ်ကြွင်းကင်းစင်အောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်ဆို သည့်အချက်တွေသည် အဓိကသော့ချက်တွေ ဖြစ်ပါသည်။
အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီကောင်းမွန်ရေးမှာ အဓိက အချက်နှစ်ချက်လိုက်နာဖို့လိုသည်။ (၁) အရည်အသွေးကောင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ကိုသာ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးဖို့ (၂) ရိတ်သိမ်းဆွတ်ခူးချိန် မှန်ကန်ပြီး ရိတ် သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာအပြည့်အ၀ အသုံးချဖို့ ဖြစ်သည်။ ပဲမျိုးစုံသီးနှံများသည် စောပြီးရိတ်သိမ်းဆွတ်ခူးလျှင် အဆန် မပြည့်၊ အစိုဓာတ်များပြီး မှိုတက်၍ အရည်အသွေးကျစေပါသည်။ နောက်ကျဆွတ်ခူးရိတ်သိမ်းလျှင် အတောင့်များကွဲအက်ပြီး အစေ့များ လွင့်စင်ထွက်ကျ၍ ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အပြင် အစေ့များနေရောင်ကြောင့် လောင်ကျွမ်းပြီး အရောင်ပျက်စေသည်။ ပဲမျိုးစုံသီးနှံများအား ဓာတု ဓာတ်ကြွင်းများ ကင်းစင်စေရန်အတွက် အထူးသ တိပြု ဆောင်ရွက်ကြ ရမှာဖြစ်သည်။ ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများ အလွန်အကျွံအသုံးမပြုဘဲ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းကို မဖြစ်မနေ ဆောင် ရွက်ဖို့လိုပါသည်။ အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP)စနစ် မလွဲမသွေစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ် ကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံက မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံများကို ပြန်လည်ဝယ်ယူပေးဖို့ ပြန်ဆက်လာတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးကလေးကို အခွင့်အရေးထူးတစ်ရပ်အဖြစ်ခံယူ၍ မိမိဘက်မှ လုံခြုံအောင် စီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
Local Trade News
ပခုက္ကူက မန်ကျည်းဈေးကွက်မှသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးသို့
ဈေးငြိမ်သော်လည်း အရောင်းသွက်တဲ့ ကယားပဲစင်းငုံ
ပေါ်သာပေါ်သည် မျှော်နေမိသည့် မတ်ပဲဈေး
ဈေးအေးသော်လည်း အရောင်းသွက်လာတဲ့ ဟင်္သာတမတ်ပဲ
ရန်ကုန်ဝယ်လက်နဲ့ ဆီစက်သမားများ အဝယ်ရှိ၍ ဈေးမြင့်လာတဲ့ ဆောင်းမြေပဲ
ပဲစင်းငုံ တင်ပို့မှု ယခင်သီတင်းပတ်များထက် ပိုမိုလာ
မုံရွာဆီထွက်သီးနှံဈေးကွက် နှမ်းထက် မြေပဲအဝယ်သွက်
နိုင်ငံတော် အရန်ဆန်အတွက် စပါးဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာ စတင်ပြီ
Building 3, Nay Pyi Taw, The Republic of the Union of Myanmar.
Tel: 067 - 408265, 067 - 408221, Fax: 067 - 408004 | Email: [email protected]
(Contect email is just for know and Please submit with formal letter for take action.)
© 2015 Ministry of Commerce. All rights reserved.